I-Wuxi Innovate Machinery Development Co, Ltd yasekwa ngo-2010 kwaye ibekwe eWuxi, isixeko esihle ecaleni kweChibi laseTaihu.Silishishini lobuchwephesha elidityaniswe yi-R & D, ukuvelisa, ukuhambisa kunye neenkonzo ezinxulumene noko, kugxila ekuyileni, kwimveliso kunye nofakelo lwezixhobo kwiZithambiso, amayeza, ukutya, amashishini amachiza amnandi, njl.
Ngokusekelwe kwilifa lemveliso yezixhobo zemichiza zemveli, sihlawula ngakumbi ukuphuculwa, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nophuhliso technology.No engasenelisekanga yimveliso enye, sigxila kuyilo olungaqhelekanga kunye nokugqibelela kwemigca yemveliso. Sinokunika izisombululo abathengi bethu, kubandakanya uyilo, ukwenziwa kunye nokufakwa kwemigca yemveliso yeenkqubo ukusuka kumalungiselelo okupakisha.
Izixhobo zethu ziveliswa phantsi kwe-IS09001: inkqubo esemgangathweni yolawulo lomgangatho ka-2008, zonke iimveliso zifezekisile imigangatho yomgangatho we-GMP, iimveliso ezininzi ziye zaqinisekiswa yi-CE.
Ngobuchwephesha obutsha, ukwenziwa kokugqitywa kunye neenkonzo ezisemgangathweni, inkampani yethu iyabulelwa ngabathengi bethu. Umgangatho / okusingqongileyo / inkqubo yolawulo lokhuseleko ibonelela ngemvelaphi eyomeleleyo kuphuhliso lweemarike, egubungela bonke abathengi bethu ukonwabela iimveliso kunye neenkonzo ezisemgangathweni ophezulu.
Iimveliso zethu zisetyenziswe kumashishini amaninzi kunye nokusebenzela abathengi kumazwe amaninzi kwihlabathi liphela.
Njenge-SME ekhokelayo yetekhnoloji (ishishini elincinci neliphakathi) eliqinisekisiweyo ngurhulumente wePhondo laseJiangsu, siphantsi kokukhula okukhawulezayo kunye nophuhliso, sizisa iitelents zesayensi kunye nezobuchwephesha kunye nezixhobo eziphezulu zokugqibezela iimveliso zethu. Masikhule kwaye sikhule kunye, sidala imeko yokuphumelela kwaye sinegalelo kwinkampani nakuluntu!
Sisoloko sinyanzelisa ukuvela kwezisombululo, sisebenzise imali elungileyo kunye nabasebenzi kuphuculo lwetekhnoloji, kwaye siququzelele ukuphuculwa kwemveliso, ukuhlangabezana neemfuno zamathemba avela kuwo onke amazwe nakwimimandla.
Inkcubeko yethu: Izinto ezintsha, ukuthembeka, ukuhanjiswa, ukunyaniseka